Kismaayo News » Raadiyaha Kismaayo oo xarigga laga jaray(+Sawiro)
Raadiyaha Kismaayo oo xarigga laga jaray(+Sawiro)
Kn:Magaalo xeebeedka Kismaayo, waxaa maanta ka dhacay munaasabad xarigga looga jaraayay raadiyaha qaranka ee Radio Kismaayo.
Munaasabadda oo ay ka soo qaby galeen masuuliyiin ka socday wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka, masuuliyiin ka socotay maamulka ku meel gaarka ee Kismaayo iyo qaar kamid ah indheer garadka ku dhaqan magaalada ayaa waxaa xarigga ka jaray Raadiyaha, Gudoomiye ku xigeenka maamulka ka arimiya Kismaayo, Yaasiin Raadaar.
Idaacaddan oo ah tii ugu horaysay taariikhda oo Kismaayo laga hirgaliyo ayaa ah idaacaddii ugu horaysay ee gobolka meel kamid ah ka hawl gasha taasi oo aysan jirin urur ama koox gooni u leh, isla markaana ah hanti qaran oo dadka u dhaxaysa.
Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Jubbooyinka iyo Gedo, Gen. Saxardiid, afhayeenka Kaambooni, Cabdinaasir Seeraar, agaasimaha xafiiska wasiirka warfaafinta, Axmed Xaaji Cabdi iyo masuuliyiin kale ayaa qayb ka ahaa munaasabadda lagu furay Radiyaha Kismaayo.
Dhamaan masuuliyiintii iyo xubnihii bulshada rayadka ee munaasabadda ka hadlay waxay isla qireen baahida dhanka saxaafadda ee gobolku qabay iyo sida ay bulshadu ugu oomantahay saxaafadda dhex dhexaad ah oo u adeegta bulshada. Waxay sidoo kale muujieen dareenkooda farxadeed ee ku aadan Radiyaha ay dawladdu ka hirgalisay Kismaayo.
Munaasabadda furitaanka kadib, qaar kamid ah shacabka magaalada ku dhaqan oo ay KismaayoNews waydiisay sida ay u arkaan idaacadda Radio Kismaayo, ayaa waxay noo sheegeen inay aad ugu faraxsanyihiin in idaacad aan cid gooni ah u adeegayn ay ka hawl gasho magaalada.
Idaacaddan oo ah mid FM ah, waxay gaaraysaa masaafo 90Km oo isku wareeg ah waxaana laga dhagaysan karaa mawjadda 90:00 FM.
Idaacaddii tan ka horeysay oo magaalada ka hawl gali jirtay ayaa ahayd idaacaddii ku hadli jirtay codka xarakada Alshabaab taasi oo lagu magacaabi jiray Andulus.